Global Voices teny Malagasy » Ambaran’ny Lingua rosiana ny fiasany miaraka amin’ny “It Gets Better” Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Febroary 2019 5:06 GMT 1	 · Mpanoratra Анна Щетникова Nandika (en) i Anna Schetnikova, Naomy
Faly ny Global Voices amin'ny teny rosiana manambara ny fanombohan'ny fiasana miaraka amin'ny tetikasa It Gets Better Rosia . Hetsika iraisampirenena iray sady tetikasam-panohanana ny tanora LGBTQ+ ny It Gets Better ; anisan'ny mpandray anjara ao aminy hatramin'ny taona 2010 ry Lady Gaga, Ellen DeGeneres ary ry Barack Obama, ary hatramin'izay dia mihoatra ny 60000 ny lahatsary vita avy amin'ny firenena mihoatra ny 20 mandray anjara.
Ao Rosia, efa niasa hatramin'ny taona 2017 ny fiasana miaraka amin'ny It Gets Better amin'ny fomba ofisialy. Ataon'ireo ekipa mpirotsaka ao Rosia ny famokarana lahatsary  ôrizinaly ahitana ny tantaran'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ izay mba nihatsara kokoa ny tontolony ka manoratra sy mandika teny ireo loharanom-baovao momba ny pelaka, lesbiana, tia lahy sy vavy, nanova fitaovam-pananahana ary ireo “hafahafa”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/07/134817/
 It Gets Better Rosia: https://vk.com/itgetsbetter_russia
 It Gets Better: https://en.wikipedia.org/wiki/It_Gets_Better_Project